अरुको मन राखिदिँदा राखिदिँदै पनि….. – Everest Dainik
अरुको मन राखिदिँदा राखिदिँदै पनि…..
कहिलेकाँही अरुको मन राखिदिँदा राखिदिँदै, आफ्नै मनमा आएका खुसीका ज्वारभाटहरु थामिनसक्नुका हुन्छन् । कहिलेकाँही अरुको मन राखिदिँदा राखिदिँदै आफ्नो मनमा छाएका अपरिमित सन्तोस पत्यार्इनसक्नुका हुन्छन् । अरुको मन राखिदिँदा राखिदिँदै, आफूबाट आफ्नै समय चुहिएर गए पनि । अरुको मन राखिदिँदा राखिदिँदै, आफ्नै उठीबास हुनेसम्मका घटना घटे पनि । अरुको मन राखिदिँदा राखिदिँदै आफैँलाई बिर्सिए पनि ।
संसारमा सबैभन्दा कमलो कुरा पनि मानिसकै मन होला । र सबैभन्दा कडा पनि मानिसको मनै होला । धेरै सम्बन्धहरु मनसँग जोडिएको हुन्छ । धेरै सम्बन्ध मनबाट तोडिएको पनि हुन्छ । अक्सर मनैले चल्छ मान्छे यहाँ, र मनकै कारणले जल्छ पनि मान्छे यहाँ । घामजस्तै पारिलो पनि मनै हुन्छ, छुरीजस्तै धारिलो पनि मनै हुँदो रहेछ । मनसँगै हुन्छ विश्वास पनि, मनसँगै हुन्छ घात प्रतिघात पनि ।
आफ्ना इच्छाहरुलाई केही पर पन्छाएर, जब कसैको मन राखिन्छ, क्षणभरलाई त्यसले दिने शान्ति अभूतपूर्व हुन्छ । आफ्नो अनुकुलताको पर्वाह नगरी कसैको मनको पुकार जब सुनिन्छ, त्यसले कमसेकम पछुताउने मौका दिँदैन ।
सम्बन्धित् समाचार कविता: छुटिसकेको माया
कतिको मन नदुखोस् भनेर मन राखिदिएँ । पछि तिनैले मन दुखाए । कति मन दुखेकाहरुमा आफ्नै मनको सुनेर मन लगाएँ । दुखाइको अन्त्य भइसकेपछि त मान्छेका मन पनि ढुँगामा परिणत हुँदारहेछन् ।
सम्बन्ध जस्तोसुकै होस्, त्यो कुनै बिरुवाझैँ हो, त्यसलाई जोगाउनु पर्छ । हो, यहि ठान्ने हुँदा आफू भने मुर्झाएर सुकिँदोरहेछ । यहि एउटा सम्बन्ध जोगाउन खोज्दा आफू कतिपटक ढालिन्इछ, काटिइन्छ, चिरिइन्छ, गाढिइन्छ, बालिइन्छ । एउटा सम्बन्धको प्राण हजारौँ सुख, सुविधा, रहर र हाँसोहरुको मृत्युले चुकाइएको हुन्छ ।
छन् नि यो पनि आफ्नै मनबाट गुज्रेको अनुभव, कि अरुको मन राख्दा राख्दा, अरु रिसाउलान् कि भन्ने चिन्ता गर्दा गर्दा, आफ्नो त कतै ठाउँ नै पो नरहँदो रहेछ । अरुलाई समस्याको जँघार तराउँदा तराउँदा आफू भने भेलमै कतै हराइँदोरहेछ । अरुको मनको मल्हम बन्दा बन्दा आफ्नो जीवनको कदम अल्झेको अल्झ्यै हुँदोरहेछ । जसको चित्त बुझाउँदा बुझाउँदै आफैँ रिक्त भइएको हुन्छ, अक्सर उनैले चित्त दुखाउँछन् । मनसितको सम्बन्धमा अक्सर मन दुखाउनेहरु नै ज्यादा भेटिन्छन् ।
सम्बन्धित् समाचार मुक्तक : सारा जीवन तड्पिएरै समर्पण गर्नैपर्ने !
मन राखिदिनका लागि अरुलाई दुख्ला कि भन्दै डराइ डराइ बोलिन्छ । मनै राखिदिनका लागि समय नै नहुँदा नहुँदै पनि, आफ्नै कामलाई पर पन्छाएर अरुको काम गरिन्छ । अरुकै मन राखिदिनका लागि आफ्नो मनैले नमानेका कैयौँ काम पनि गरिन्छ। अरुलाई सुकिलो बनाइदिन आफू मैलिएको समेत पत्तो हुन्न ।
एउटा सम्बन्ध यसै नमरोस् भनेर, आफ्नो रहर त कति पो मारिएछ। आफूलाई परबाट देख्दा हरेकपटक हाँस्ने ओठ कहिल्यै बन्द नहोस् भनेर आफूलाई उसकै अनुकुलतामा ठाउँ कुठाउँ खोलिएछ। सधैँ मिलाउनलाई मतिर अघि बढ्ने हातहरु अनायास मैतिर सोझिएर धार नलागोस् भनेर आफैँलाई तौलेर प्रस्तुत गरेको छु ।
अरुको मन राखिदिनका लागि जे जति गरेँ, त्यतिको मिहिनेत र श्रम लगाएर आफ्नो मन राखेको भए, सायद म आफैँ पो केही बन्ने थिएँ । सायद आफूलाई खुसी तुल्याउन सक्थेँ कि १ तरपनि यहि मन मान्दैन । मन उही अरुकै चित्त बुझाएर पाइने आनन्दकै पछि कुनै एककोहोरो प्रेमी आफूले मन पराएकी केटीको पछाडी दगुरेझैँ दगुरिरहेछ । मसित मेरा सपनाहरु रिसाएका छन् । मसित मेरै समय क्रुद्ध छ । मसित मेरा खुसीले निहुँ खोजेका कति कति घटना छन् । कतिपटक त म आफैँले आफैँलाई माफ गर्न सकेको छैन । मलाई मेरो आफ्नै मनसँग गुनासो छ कि अरुको मन राखिदिँदा राखिदिँदै म आफैँ कहीँको रहिनँ ?
सम्बन्धित् समाचार यमपञ्चकको दोश्रो दिन आज कुकुर तिहार